Noma ubani onentshisekelo yokushayela kwiseva yami usebenzisa i-JoinFS namaLOTS we-AI ???
Umbuzo Noma ubani onentshisekelo yokushayela kwiseva yami usebenzisa i-JoinFS namaLOTS we-AI ???
izinyanga 9 3 Sekwedlule amaviki #900 by fltbuff71
Bheka iwebhusayithi fsxflywithmanyai.weebly.com ukuthola imininingwane
Izosetha indiza yeqembu kuseduze esikhathini esizayo uma inzalo eyanele.
Ayikwazi ukundiza i-AI kubadlali abaningi ku-Steam, kodwa i-JoinFS inhle futhi ungahamba nge-Steam, Ibhokisi, noma enye i-Flight Sim endizeni yamahhala.
Bona izithombe ezihlanganiswe nami nge-Ai Flight Planner. .my server, ne-JoinFS
izinyanga 8 3 Sekwedlule amaviki #996 by fltbuff71
ngifuna nanoma yisiphi isithakazelo sokujoyina kule seva kumalungu e-MARCH 2018 aphelile, ngezindiza eziningi ze-AI, ngokwakho, futhi usebenzisa i-DISCORD ???????
izinyanga 8 3 Sekwedlule amaviki #1003 by fltbuff71
izinyanga 8 3 Sekwedlule amaviki #1007 by fltbuff71
Isikhathi ukudala page: 1.883 imizuzwana